मदिरा र मतली औषधि: के म ड्रामाइन र रक्सी मिक्स गर्न सक्छु? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, औषधि जानकारी घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार प्रेस भारी खेल कल्याण खेलहरु कम्पनी मनोरञ्जन कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> औषधि जानकारी >> मदिरा र मतली औषधि: के म ड्रामाइन र रक्सी मिक्स गर्न सक्छु?
मदिरा र मतली औषधि: के म ड्रामाइन र रक्सी मिक्स गर्न सक्छु?
औषधि जानकारी मिक्स-अप
यो चित्र — तपाईं क्रूज जहाजमा हुनुहुन्छ, समुद्री रोगको अनुभव गर्न थाल्नुहोस्, र मोशन सिक्नेसको लागि तपाईं ड्रामेमाइन लिनुहुन्छ। केहि घण्टा पछि राम्रो महसुस भएको छ, तपाईं नृत्य भुइँमा बाहिर कदम। तपाईंले यो थाँहा पाउनु अघि, प्रतीक्षाकर्ताले तपाईंलाई एक स्वादिष्ट पिना कोलाडा प्रदान गर्दैछ। जब तपाईं खुसीसाथ तुसारो पेय स्वीकार्नुहुन्छ, तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ, के म ड्रामेइन र मदिरा मिश्रण गर्न सक्छु?
सम्बन्धित: नाटक के हो? | ड्रामामाई कुपनहरू पाउनुहोस्
के तपाई पिउन सक्नुहुन्छ मोशन सिक्नेस पिल्स लिदा?
ड्रामामाइनका अतिरिक्त, त्यहाँ अन्य गोलीहरू छन् जसले गति बिरामीको लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसमा भएका सामग्रीहरूमा हेरौं सबै भन्दा सामान्य गति बिमारी दवाइहरु र तिनीहरू मदिरासँग उपयुक्त छन् कि छैन।
डायमेनाहाइड्रिनेट एक ड्राईमाइन, एक over-the-the- काउन्टर औषधी (OTC) को विभिन्न योगहरुमा फेला पारिएको सक्रिय घटक हो। डायमेनाहाइड्रिनेट र रक्सी मिसिनु हुँदैन । तिनीहरूको आफ्नैमा, यी पदार्थहरू प्रत्येकमा निन्द्रा, चक्कर, र बिग्रेको समन्वय हुन सक्छ। संयुक्त रूपमा, यी प्रभावहरू अझ प्रबल हुन सक्दछ, डाइमिहाइड्रिनेट र रक्सीलाई खतरनाक संयोजन बनाउँदछ। त्यहाँ अधिक मात्राको उच्च जोखिम पनि छ। ड्रामामाइन ओभरडोजको स Sign्केत गम्भीर निन्द्रादेखि मतिभ्रम, सास फेर्न गाह्रो, दौरा, अनियमित मुटुको धडकन, र कोमासम्म हुन सक्छ।
मेक्लिजाइन OTC पनि, यो फेला परेको घटक हो Bonine , अर्को गति बिमारी औषधि। मेक्लीजाइन पनि फेला पर्‍यो ड्रामाइन कम सुस्त (घटकको लागि लेबल जाँच गर्नुहोस्)। को उही चेतावनी melpizine लाई Dimehydrinate को रूपमा लागू गर्नुहोस् Bon Bonine र मदिरा संयोजन गर्नबाट जोगिनुहोस् किनकि तपाईं गम्भीर साइड इफेक्ट र अधिक मात्राको सम्भावनाको जोखिम लिनुहुन्छ।
Scopolamine , ब्रान्ड-नाम ट्रान्सडर्म-स्कोपको रूपमा परिचित छ, लोकप्रिय प्रिस्क्रिप्शन प्याचहरू हुन् जुन तीन दिनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र क्रुज जहाज अतिथिहरूमाझ लोकप्रिय छ। जे होस्, प्याच शीर्ष रूपमा लागू भएता पनि, समान चेतावनी scopolamine मा लागू , र रक्सी जोगिनु पर्छ।
प्रोमेथाजिन मोशन सिकनेस र मतली / बान्ता सहित विभिन्न कारणहरूको लागि विभिन्न कारणका लागि प्रयोग गरिएको एक प्रिस्क्रिप्शन एन्टीहिस्टामाइन हो। प्रोमेथाजाइन र रक्सी ममिदैन । चाहे मौखिक तरलको रूपमा वा रेक्टल सपोसिटरीको रूपमा लिईयो, प्रोमेटहाजीनलाई मदिरायुक्त पेय पदार्थको मिश्रणले अत्यधिक तन्द्रा र कमजोर मानसिक समन्वय निम्त्याउन सक्छ। यी प्रभावहरू हुन् अधिक स्पष्ट वयस्कहरूमा। के अधिक छ, मौखिक समाधान निर्माणमा पहिले नै already% रक्सी हुन्छ।
जोफ्रान (ondansetron) , जबकि मोशन बिरामीको लागि विशेष गरी होईन, एक लोकप्रिय प्रिस्क्रिप्सन औषधि हो जुन मतलीको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। जे होस् Zofran र रक्सीले प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दैन, Zofran धेरै सामान्य छ साइड इफेक्ट त्यो रक्सीले खराब गर्न सक्दछ, जस्तै निद्रा वा चक्कर। यदि तपाईंले Zofran लिनुभयो भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जाँच गर्नुहोस् कि तपाईं सुरक्षित रूपमा रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ कि सक्दैनौं।
सम्बन्धित: के म Benadryl (diphenhydramine) लिँदा पिउन सक्छु?
यदि म गति बिमारीको औषधि लिइरहेको छु भने कहिले म पिउन सक्छु?
यदि तपाइँ तपाइँको औषधि बन्द भए पछि केहि ककटेलहरूको मजा लिन चाहानुहुन्छ, तपाइँको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग तपाइँले पिउनुभन्दा कति बेर पर्खनुपर्दछ भनेर जाँच गर्नुहोस्। विभिन्न फॉर्मूलेसन र खुराकहरू उपलब्ध छन्, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाइँ पिउन अघि प्रतीक्षा गर्न उचित समयको लागि उचित चिकित्सा सल्लाह दिन सक्छ।
के रक्सीले गति बिमारीलाई सहयोग पुर्‍याउँछ?
यदि तपाई मोशन बिमारीसँग मद्दत गर्न औषधीको सट्टामा मदिरा प्रयोग गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, फेरि सोच्नुहोस्। तपाईंले लिने कुनै पनि औषधिहरूको पर्वा बिना, पूरै रक्सी पिउनु उत्तम हुन्छ। रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू (CDC) सिफारिस गर्नुहोस् कि मोशन बिरामी भएका व्यक्तिहरूले रक्सी र क्याफिन (र प्रशस्त पानी पिउँछन्) लाई हाइड्रेट गर्न सीमित गर्छन्।
म रक्सी पिउन चाहन्छु भने म गति रोगबाट कसरी बच्न सक्छु?
यदि तपाईं रक्सीको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ तर गति बिमारी वा मतलीबाट जोगिनुहुन्छ भने के हुन्छ? प्रशस्त पानी पिउनको अतिरिक्त, यहाँ छन् केहि थप सुझावहरू औषधि नलिई गति बिमारी हुनबाट जोगिन:
के खानुहुन्छ हेर्नुहोस्। केही हल्का खाजा वा स्वस्थ खानाले गति बिमारी रोक्न मद्दत गर्दछ। भारी, चिल्लो वा एसिडिक खानाको सट्टा सम्पूर्ण अन्नको रोटी, फल र पानीमा स्यान्डविचहरू सोच्नुहोस्। यदि तपाईं पहिले नै गति बिरामी महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, केहि ड्राई क्र्याकरहरू र अदुवाको टाउको प्रयोग गर्नुहोस्।
केहि बेर सुत। गुणस्तरीय निद्राले गति बिमारीको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
आफ्नो टाउको आराम एउटा कारमा, तपाईको टाउको स्थिर रहनको लागि हेडरेस्टको बिरूद्ध तपाईंको टाउको झुकाउनुहोस्। र आफ्नो फोन पढ्न वा स्क्रोल गर्नको लागि मर्दै गरेको त्यो रोमाञ्चकारी किताब नलगाउनुहोस्aचलिरहेको कारमा पढ्दा मोशन रोग लाग्न सक्छ यदि तपाईं पहिले नै प्रवण हुनुहुन्छ भने।
औषधि र रक्सी मिक्स गर्ने बारेमा व्यक्तिगत सिफारिशको लागि सँधै तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा फार्मासिष्टसँग परामर्श लिनुहोस्। किनकि सबैजनाको बिभिन्न मेडिकल अवस्था हुन्छ र बिभिन्न औषधिहरू लिन्छ, तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरसँग परामर्श गरेर सुरक्षित हुनु उत्तम हुन्छ।
एक गर्भवती महिला दुखाई को लागी के लिन सक्नुहुन्छ?
अस्टिन ब्रायन्ट लायन्स को क्यारियर को लागी चोट-पीडित शुरू मा पछुताउनुहुन्न
योनि खमीर संक्रमण को स्वाभाविक रूप बाट कसरी उपचार गर्ने
कसरी कम गर्न को लागी रक्तचाप छिटो आपतकालिन
म xanax लिए पछि कती समय सम्म पिउन सक्छु
सबै भन्दा राम्रो चीज जब तपाइँलाई चिसो हुन्छ
कति 800mg ibuprofen म लिन सक्छु